UQALA NINI UKUKHANGELA INDAWO YOKWAMKELA UMTSHATO - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Nantsi indawo yokuqalisa ukujonga indawo yokwamkela
Nantsi indawo yokuqalisa ukujonga indawo yokwamkela
Fumana indawo efanelekileyo yepati malunga noku kwangaphambili. Iintaka zeentsiba Ukuhlaziywa ngoFebruwari 13, 2019
Umbuzo wokuqala esandula ukutshata uqhele ukuwubuza ngulo: Kufuneka siqale ngokukhawuleza kangakanani ukukhangela indawo yokwamkela iindwendwe? Kwaye kuxhomekeke ekubeni ukulungele kangakanani na ukucwangcisa, ukhangela ntoni kwaye kungekudala ufuna ukutshata.
Ngokubanzi, kuya kufuneka ucwangcise ukubhukisha indawo yakho yokwamkela umtshato ubuncinci unyaka ukuya kwiinyanga ezilithoba ngaphambi komhla wakho. Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uqale uphando kunye nokutyelela inyanga okanye ezimbini ngaphambi koko. Khumbula, ukuba intliziyo yakho imiselwe kwindawo ethile, yakho umhla womtshato Kuya kuxhomekeka kuphela kwinto ekhoyo le ndawo. Kwaye ukuba ujonge ukubakho kwendawo ngexesha leenyanga zomtshato (phakathi kuka-Meyi no-Okthobha), kuya kufuneka ubhetyebhetye malunga nomhla kunye nendawo oyifunayo.
Ngaba ubandakanyekile kwaye wampompela ukuqala ukukhangela kwakho? Qhubeka uye kuyo, nokuba awucwangcisi ukuthi 'ndiyayenza' ngomnye unyaka okanye nangaphezulu. Izithuba zinokubhukisha iminyaka emibini ukuya kwemithathu kwangaphambili, kwaye zininzi ezinye izibini eziza kufuna indawo kunye nomhla ofanayo nawe. Xa ucinga ngako, ayikho into enje ngokubhukisha 'kwangoko' — ngaphandle kokuba niyathandana. Unokutshixa kwindawo entle yepati kwaye ujonge ukuba kukwenza okukhulu kuluhlu lwakho.
Kwicala elisezantsi, kulungile ukubamba kwaye ukonwabele ukubandakanyeka kwakho okwethutyana. Ngapha koko, ukuba unexesha lokugcina, siyakukhuthaza! Kwaye ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi, qala ngokuthatha i-Quiz yethu yesitayile ukuze ufumane into oyifunayo.
UJoe jonas kunye no-sophie bajike
Kutheni oomolokazana benxiba izigqubuthelo zobuso
umama omnandi unyana iingoma zomtshato
ivesi yebhayibhile ngothando lukaThixo
Ixabisa malini ukufota?